Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyad Cusub oo Somalida Ogadenya ah oo Laga Yagleelay Gobolka Texas ee Wadanka Maraykanka
Jaaliyad Cusub oo Somalida Ogadenya ah oo Laga Yagleelay Gobolka Texas ee Wadanka Maraykanka
Jaaliyadaha Ogadenia ee dalka Maraykanka oo baryahan Danbe waday dadaalo Iyo abaabul kor loogu qaadayo hawlaha halganka ayaa ku gulaystay dhisida faracyo cusub oo logu doortay maamul dhamaystuiran. Faracan ayaa laga aas aasay magaladda Lufkin iyo Nacogdoches ee gobolka Texas ee cariga maraykanka , waxaa gudoomiye loo doortay Mudane Mataan Xuseen Iyo gudigii kale ee faraca.
Dadaalkan lagu abaabulayay faraca laga dhisay magaloyinka gobolka Texas ayaa waxaa siwayn isaga kashaday xubnaha magaladda St.cloud iyo xubno kale oo kunool is la gobolka Taxes, oo baryahan Danbe waday dadaal kor loogu qaadayo hawlaha halganka iyo ababulka Maraykanka.
Asaska Jaliyadaha cusub ee cariga maraykanka iyo dunidakaleba waxay dalil cad u tahay inuu halganka gobanimadonka ah ee ah JWXO hogaminayso inuuu si xowli ah ku talabsanayo, waxayna mesh aka saraysaa bentii raqiska ahayd ee uu gumaysiga Ethiopia iyo dabadhilifkoodu ku sheganayeen inay wiqeen tagerayashii ONLF ee gurbaha.
Dhanka kale waxay arintani xaqiijinaysaa in shacabka Ogadenya ay ka goantahay inay Gobanimo isudiyariyan, mar hadii ay shacbka Ogadneya melkasta oy jogan ama tira kasta oo ay leyihin ay kuhaminayan inay Jaliyad samaystan si ay ugarab istagan Halgankooda xaqaha.
Iskuso dubo, marka aad aragtid sida ay Jaliyada Ogadenya ee qurbaha kuneel ay u xuseen Sanadguradii 31 aad ee kasoo waregatay asaskii JWXO/ONLF iyo Jaliyadaha cusub ee malin kasta ka aburmaya qurbaha , ayaa waxay quskuridaysaa damaca Ethiopia ee ah inay sii gumaystan Ogadenya, waxaana iska cad hadii ay shacbka Ogadenya sidan kusii wadan dadalkooda ayagoo talasaranaya rabigood (SW) inay guusha mar dhow hananayaan Insha Allah.